Achraf Hakimi Oo Ka Hadlay Hadii Uu Real Ka Tagayo %
Achraf Hakimi, daafaca dambeedka midig uga dheela naadiga kubada cagta ee Real Madrid iyo qaranka Morocco ayaa wareysi uu siiyay Majalada MARCA, ee wadanka Spain wuxuu uga hadlay mustaqbalkiisa iyo wararka sheegaya inuu tagayo dhamaadka xagaagan.
Laacibkaan ayaa wuxuu ka dhacayaa qandaraaska uu Los Blancos kula joogo dabayaaqadda fasal ciyaareedkan, isagoona wali aanan laga saxiixin heshiis cusub, kaasoo uu baaqi ugu sii ahaayo boqorada horyaalka Spain iyo Champions League.
Achraf, ayaa wuxuu kamid yahy da’yarta uu Madrid usoo saaray xagaagan tababare Zidane isagoona kasoo baxay Akadeemiyadda Madrid, wuxuuna noqday xidigii ugu horeeyay ee reer Morocco ah, kaasoo Real Madrid udheela.
“Aniga mar walba waxaa doonayaa inaan udheelo Real Madrid,” ayuu ku jawaabay Ashraf Hakimi, mar la su’aalay hadii uu ka tagayo Real Madrid, maadaama uusan haysan boos-joogta ah uuna had iyo goor yahay dookha labaad.
“Waxaan rabaa inaan wax badan aan la noolaado Madridista, waxaana rajeynayaa inaan halkaan sii joogo wax badan,” ayuu hadalkiisa kusii daray laacibkaan.
“Waxaan hada dareemayaa wanaag badan, waxaana rajeynayaa inaan sugi doono waqtigayga iyo fursad walba oo aan helo, waxaana diyaar aan u ahay inaan ushaqeeyo si adag si aan ugu yaraan booska koowaad aan uhelo,” ayuu hadalkiisa kusoo xiray Achraf Hakimi.